Ao Al-Waer, Siria, Mitambesatra Amin’ireo Mponina Ny Tsy Fahazoana Antoka ny Famindràna Toerana · Global Voices teny Malagasy
Ao Al-Waer, Siria, Mitambesatra Amin'ireo Mponina Ny Tsy Fahazoana Antoka ny Famindràna Toerana
Voadika ny 15 Jona 2017 13:20 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, 日本語, English
Ireo mponina ao Al-Waer mandray ny fiarabe fitaterana hitondra azy ireo ho any Jarablus, avaratr'i Siria, iray amin'ireo toeram-pitodiana ‘nofinidiny’ haleha taorian'ireo fifanarahana farany indrindra teo amin'ny fitondràna sy ny mpanohitra mitam-piadiana. Ny Kianja Madinat Al-Maared , Al-Waer, Homs. Nopihana ny 27 Martsa 2017. Loharano : Maher Al-Khaled/SyriaUntold.
Ireo Siriana mpihoko ombam-pianakaviana eo an-dàlana ny handao ny toerana farany namahàran-dry zareo tao Al-Waer, izay nohosorana ny anarana hoe “ny renivohitry ny revolisiona,” taorian'ny fifanarahana iray teo ambany fanelanelanan'i Rosia. Hanao andiany ny fanatanterahana ilay famindràna, mandra-pialàn'izay olona farany indrindra hiala ao amin'ilay distrika, ka amin'izay fotoana izay dia ny tafi-panjakana Siriana no handray ny tanàna.
Nomena safidy ny hijanona ihany koa anefa ireo mponina.
Tery eo anelanelan'ny fiheverany ny tenany ho nafindra sy voahongotra hatramin'ny fàkany ireo vahoaka sivily amin'izao fotoana izao, etsy ankilany, na mijanona ao anaty fisalasalàna, etsy andaniny, ny safidy iray faran'izay sarotra dia sarotra ny handray azy.
Ity dia fizaràna faharoa amin'ny tantara iray nosoratana ho an'ny Siria tsy Voalaza -SyriaUntold avy amin'i Jood Mahbani, mpanao gazety mipetraka ao Homs no sady sivily mpikatroka, ary nadikan'i Yaaser Azzayyaat. Ny 8 May 2017 ity no nivoaka voalohany ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fiarahana miasa. Vakio ato ny andiany voalohany: “Handeha sa Hijanona, Safidy Mametraka an'ireo Siriana Ao Al-Waer Manoloana ny Hoavy Tsy Azo Antoka”
Araka ilay fifanarahana, ireo izay maniry ny handeha hiaraka amin'ireo mpihoko dia avela hiàla amin'ny alàlan'ny famindràna andiany atao isankerinandro, ka olona 1.500 hatramin'ny 2.000 isankerinandro eo. Azo eritreretina ny hitohizan'ireo andiany ireo hatramin'ny tapaky ny volana May, arahan'ny fiparitahan'ny polisy sivily Siriana sy Rosiana.
Taorian'ny nikarohana tao amin'ilay distrika sy niantohana ny filaminan'ireo mponina tavela eo ambany fanarahamason'ny Rosiana, izay heverina fa handresy lahatra hanakana ny mety ho fihetsika famaizana, dia ho averina tanteraka amin'ny tafi-panjakana Siriana ilay faritra. Io teboka manokana io no mampahatahotra ny olona ary manome toerana ho an'ny fivezivezen'ny honohono : Inona no hanjo ireo izay mijanona aorian'ny famerenana ilay distrika ho an'ny tafi-panjakana?
Tsy misy na iray aza amin'ireny fanontaniana ireny no afaka hovaliana, na efa namerimberina aza ny governemanta Siriana nilaza, tamin'ny alàlan'ny Governoran'i Homs, Talal Al-Barazi, hoe tsy hisy ho voatohintohina ireo sivily izay mijanona ao amin'ilay distrika, ary amporisihan'ny governemanta ny olona mba hijanona.
Ao anatin'ny ezaka hampitàna ny fikasàna tsara ho any amin'ireo mponina, nangatahan‘ny governemanta Siriana ny kaomity izay misolo tena ny ao amin'ny faritra mba handray ny anaran'ìireo nandao na lasa any Jarablus sy Idlib ka mety haniry ny hiverina ho ao amin'ilay distrika — raha toa ka nandao izy ireny ary nanenina taty aoriana ary nanapaka hevitra ny hiverina ho any Al-Waer.
Ireny fanomezantoky rehetra ireny, anefa, toa tsy maharesy lahatra ireo fianakaviana mbola tavela ao amin'ilay distrika tsy handao miaraka amin'ireo andiany manaraka eo. Miverimberina isankerinandro ny fahitàna famindràna toerana, rehefa vavolombelona mahita maso ny fivangongoan'ireo olona marobe manodidina ireo fiarabe maitso miditra ao amin'ny distrika ny Kianja Madinat Al-Maared, fiarabe tonga hamindra ireo fanakaviana ho any amin'ny toeram-pitodiana nofinidin-dry zareo. Eo, mifanao veloma ny tsirairay, tsy hita eny anaty mason'izy ireo ny fanantenana, ary marobe no mandà tsy hiresaka amin'ny mpanangona vaovao.
Manoloana ny iray amin'ireo fiarabe, miahotrahotra ny tovovavy iray ny hiakatra ao anaty fiara taorian'ny nanaovany veloma ireo havany tsirairay avy. Manopy ny masony amin'ny manodidina azy izy, ary avy eo mijery ny tongony dia mijajirika. Toy ny mandrakotra an-dratovovavy ny fahatsapana hoe ity no diantongotra farany apetrany ho an'ny manodidina azy, izay mety tsy hodiaviny intsony mandritra ny taona marobe. Tsy mijanona ela toy izany izy, satria manomboka tsy manana faharetana ireo vehivavy hafa ka manosika azy hiditra any anaty fiara, izay vetivety foana dia tsy ahatazanana azy intsony.
Ery ampitan'ilay fiara misy lahiantitra iray mijoro tsy mivimbina entana, izay mampiseho fa mihevitra ny hijanona izy. Fihininy mafy ny tànan'ny zafikeliny, alohan'ny hiakaran'ilay zaza ho ao anaty fiara miaraka amin'ny ray aman-dreniny. Mamihina ny zanany lahy amin'ny tànany iray ilay lahiantitra, ny iray hafa momba mitàna hatrany ny tànana kelin'ilay zafikeliny.
“Miangavy aho, dada, avelao aho hijanona hiaraka amin'i dadabe,” hoy ilay zaza tamin-dranomaso nanorika avy amin'ireo masony. Sarotsarotra ho an-drainy ihany ny misintona ny tànan-janany hiala amin'ny an'ilay raibeny, avy eo manoroka ny handrin'ilay rainy efa antitra fanindroany, ary nanonona ny fehezanteniny farany: “Mamelà ahy, ry dada, tsy safidiko velively ny handeha.” Miakatra haingana miditra ilay fiara izy sy ny vadiny ary ny zaza, miafina any anatin'ireo mpandeha ary mamela ilay lahiantitra hijajirika irery eo an-kianja.
Ny 24 Aprily, 2017, nitohy nandritry ny andro tontolo ny fandaminana ny famindràna fanineniny, izay hitodi-doha ho any Jarablus, nahatonga ireo mponina ho tena trotraka sy reraka mafy. Amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy io, voaomana indray hivoa-drà hamela ny mponiny handeha hifindra an-terisetra ilay faritra.
Tsara marihana fa i Al-Waer teo ambany fifehezan'ny mpihoko dia niharan'ny fampielezankevitra marobe mitratrevatreva nataon'ny tafika. Ny fahirano goavana farany dia dimy taona farany no nanatanterahan'ny tafi-panjakana Siriana azy, niafara taminà onjam-pamindràna toerana izay nitondra nankany amin'ny fihenan'ireo mponina sivily tao an-toerana.
Tamin'ny bemidina farany nataon'ny tafika tany am-piandohan'ny Febroary 2017, nisy ny vanja nalatsaka avy eny an'habakabaka, sambany niraraka tao Al-Waer hatramin'ny 2011, araka ny fijorona vavolombelona nataon'ireo mponina sy mpitsabo tao an-toerana. Farany dia nilavo lefona ireo mpanohitra mitam-piadiana ary nanaiky ny hiala tao amin'ilay faritra, raha toa ireo izay maniry ny hiàla ka omena alàlana ihany koa handeha any amin'ireo faritra ambany fifehezan'ny mpanohitra.